सुरू भयो मौन अवधिः यस्तो छ आयोगको आग्रह - NepalPana
नेपाल पाना १९ मंसिर २०७४, मंगलवार ०९:३७ मा प्रकाशित
यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ, यो अवधिमा निर्वाचन प्रसारप्रसार गर्न पाइँदैन । मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका प्रचारसामग्री हटाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
ओलीको निर्देशनमा राष्ट्रपतिले उठाईन यस्तो कदम, संविधानविद्दको आपति काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख दलबीच सहमति नभएसम्म राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत […]
मञ्चमा भक्कानिए एक्ला सांसद: अध्यक्षलाई दिए यस्तो संज्ञा झापा । क्षेत्र नम्बर ३ बाट विजयी भएका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन प्रतिनिधिसभामा राप्रपाका एकमात्र […]
किन बढ्न सकेन कांग्रेसको जनमत?, कसरी बढे वामपन्थी ? काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पछिल्लो निर्वाचनबाट वामपन्थी दलहरू झन्डै दुई तिहाइको नजिक पुगेका छन् […]
महिला प्रतिनिधित्वको प्रभाव: समानुपातिकबाट २९ पुरुष मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारहरु न्यून देखिए […]
पार्टी पराजयपछि देउवाको यस्तो छ तयारी, के दिन्छन त राजिनामा काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी महासमिति बैठक बोलाउनेबारे निकटस्थसँग छलफल सुरु गरेका […]
कुन नेता कहाँबाट मतदान गर्दै छन् ? प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाअन्तर्गत बिहीबार हुन गइरहेको दोस्रो चरण निर्वाचनमा प्रमुख दलका सबैजसो शीर्ष नेताले […]